Munaasabad lagu taageeraayay Xukuumadda cusub oo Muqdisho lagu qabtay – Radio Muqdisho
Munaasabad lagu taageeraayay Xukuumadda cusub oo Muqdisho lagu qabtay
Kulankani oo lagu taageeraayay xukuumada cusub ee uu dhawaan soo dhisay Ra’isul wasaaraha dowlada Soomaaliya madnane Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmarke ayaa waxaa kasoo qeyb galay waxgarad,siyaasiyiin,culuma’udiin iyo dhalinyaro.
Maxamed Macalin Yuusuf Garabey iyo Maxamud Bashiir Qaasim Daqare oo kamid ah siyaasiyiinti ka qeyb gashay kulan kaasi ayaa xildhibaanada Barlamanka Soomaaliya ka dal baday in ay an saxiyaan xukuumada cusub uu soo dhisay Ra’isul wasaaraha dalka si ummadda Soomaaliyed ay u gaaran cadaalad horumar iyo xasilooni.
Dhanka kale waxaa kulan kaasi ka hadlay qaar kamid ah dhalinyaradii ka qeyb gashay kulanka lagu taageeraye xukuumada cusub ayaa waxa ay xildhibaanada golaha shacabka ka codsadeen in ay ansaxiyaan xukuumada uu soo magacaabay Ra’isul wasaare Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmarke si loo dardargeliyo howlaha horyaala dowladda Soomaaliya.
Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa gudaha dalka iyo dibada lagu qabanaayey munaasabado iyo shirar lagu taageeraaye xukuumada cusub ee dhawaan soo dhisay Ra’isul wasaare Cumar Cabdi Rashiid islamarkaana la filaayo in la horgeeyo Barlamaanka Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka magacaaabn oo maanta soo gaaray Muqdisho”sawiro”
Musharax cusub oo u taagan Madaxtinimada gobollada Dhexe oo lagu soo dhaweeyay Guriceel “SAWIRRO”
Musharax cusub oo u taagan Madaxtinimada gobollada Dhexe oo lagu soo dhaweeyay Guriceel "SAWIRRO"